Soo dejisan Wise Care 365 5.5.5.550 Standard... – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & Waxyeelaynta,Tijaabada iyo TijaabooyinkaWise Care 365
Qaybaha: Nadiifinta & Waxyeelaynta, Tijaabada iyo Tijaabooyinka
Shatiga: Bilaash, maxkamad
Bogga rasmiga ah: Wise Care 365
Falsan Care 365 – software ah si loo hagaajiyo iyo tayadoodii hawlgalka nidaamka. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u hubiso computer ee dayacanka iyo ogaadaa waxyaabaha khatarta ah in ay halis gelin ammaanka ee nidaamka. Care falsan 365 ka kooban module ka dhisay-in loogu talagalay in lagu saxo khaladaadka iyo nadiifiso diiwaanka nidaamka baxay files la isticmaalin, khasnado, qaybaha Windows, codsiyada dhacsan, iwm Care falsan 365 tayadoodii karaa qaab computer by defragmenting disk adag iyo diiwaanka ama goynta barnaamijyada aan waxtar lahayn oo ku baabbi’iyee khayraadka nidaamka. Care falsan 365 bixisaa sirta xogta shakhsiga ah user ee, uu mamnuucayaa ka kaxayntu ay of files iyo helitaanka xogta u cid saddexaad.
Hubinta of computer ah dayacanka ah
Correction qaladaad ku jira diiwaanka nidaamka
Defragmentation of disk adag
Recovery of faylasha tirtiray
ilaalinta xogta Confidential
Soo dejisan Wise Care 365
Agabka in ay tayadoodii iyo nadiifiso nidaamka ka files aan loo baahnayn. software The kuu ogolaanayaa inaad tirtirto faylasha ku meel gaar ah oo loo sameeyo defragmentation aad disk adag.
Tool si loo ogaado iyo hagaajin ku Xunyahay, in nidaamka. Software ayaa awood u soo diri su’aalaha leh sharaxaad faahfaahsan oo ku qalad ku ah nidaamka iyo shaashada si uu forum horumarinta.
Faallo ku saabsan Wise Care 365
Wise Care 365 Xirfadaha la xiriira
Agabka in la baadho oo la saxo khaladaadka ku jira nidaamka. Sidoo kale software awood u siineysaa inay defragment drive adag.
CCleaner – software caan ka ah nadiifinta iyo tayaynta nidaamka. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka saarto xogta diiwaangelinta oo aad nadiifiso taariikhda waxqabadka internetka.
DriverMax – waa aalad si deg deg ah oo hufan loogu wada darawalada. Software wuxuu falanqeynayaa macluumaadka si faahfaahsan oo ku saabsan aaladda wuxuuna soo bandhigayaa darawallada loo baahan yahay.
software ah in la archives of noocyo kala duwan u shaqeeyaan. software wuxuu bixiyaa heer sare ah riixo file oo midaynaysa la sahamisa ee nidaamka qalliinka.
Dayrarka – softiweer si ay u abaabulaan astaamaha desktop-ka adiga oo uqeybinaya qaybo kaladuwan. Software-ka ayaa awood u siiya inuu muujiyo muuqaalka muuqaalka baloogyada leh astaamo loogu talagalay baahiyaha isticmaaleha.
software waxaa loogu talagalay si aad u nadiifiso iPhone iyo iPad ka files ku meel gaar ah, khasnado codsiga, cookies, files labalaabka, wac taariikhda iyo macluumaad kale oo aan loo baahnayn.
Qalab ee lagula socdo arrimaha gudaha ee sawiro 3D. Software soo bandhigayaa naqshadda faahfaahsan oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee dhismaha iyo tas-hiilaadka kale.
The macmiilka torrent caan ah si ay u soo dejisan iyo wadaagaan files ku saabsan internetka. software waxay leedahay hawlaha waxtar leh oo kuu ogolaanaya in aad ku xidhi daro ah.